प्रकाशले फेरी लेखे यस्तो मार्मिक स्टाटस – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/प्रकाशले फेरी लेखे यस्तो मार्मिक स्टाटस
प्रकाशले फेरी लेखे यस्तो मार्मिक स्टाटस
काठमाडौं । अक्सर प्रेम कथामा निर्मित चलचित्रमा हामी देख्छौँ, नायक र नायिका एक अर्कालाई अत्यन्तै प्रेम गर्छन् । युवा मनमा अं’कुराएको प्रेमको डोरी कसिलो भएर जान्छ । तर अफसोच उनीहरुको प्रेम परिवारले स्वीकार गर्दैनन् अनि भागेर अन्तै कतै जान्छन् । निर्देशकले उनीहरुलाई मायालुको गाउँमा पुर्याउँछन् । त्यसपछि दुखसुख चलाउँदै गर्दा उनीहरुलाई परिवारले खोजीनिती गर्छन् । फेला पार्छन् । छु’टाउन खोज्छन् तर सक्दैनन् । अन्तत उनीहरुको विवाह गराइदिन राजी हुन्छन् । र दुवै परिवारका तर्फबाट धुमधामका साथ बिहे गरिदिन तयारी गर्छन् ।
नायक नायिका दुवै खुसीले उफ्रिन्छन् । आफ्नो प्रेमको जित भएको खुसीसँगै आफ्ना साथीलाई निम्ता गर्न जान्छन् ।अनि फिल्ममा ट्वीस्ट आउँछ ।दर्शक झसंग हुन्छन् ।हो निम्ता बाँड्ने क्रममा साईकलमा सवार हुनेवाला दुलही अचानक दु’र्घटनामा पर्छिन् अनि उनको त्यहि नि’धन हुन्छ । परिवारको राजीखुसीमा आफ्नो हुनै लागेकी आफ्नी दुलहीको यसरी मृ-त्यु हुँदा हिरो अर्थात् हुनेवाला बेहुला कति वि’क्षिप्त हुन्छन् । आफ्नो वर्षौंदेखिको प्रेमलाई नि’यतिले चटक्क चु’डाएर लैजाँदा उसको सारा सपना च’कनाचुर हुन्छ । उसले देखेको सँगै बाँच्ने सपना, सुखदुख, उकाली ओराली अनि भन्ज्याङ चौतारी सँगै गर्ने सपना पल भरमै जलेर खरानी हुँदा उसले कहाँ मन बुझाउन सक्छ र वर्षौंदेखि ति’र्खाएको का’काकुल झैँ हुन्छ उसको जीवन पनि ।
यो त रील लाइफको कुरा भयो एकछिन अभिनय हुन्छ रीलमा कै’द गरिन्छ । त्यसपछि दर्शक समक्ष पुर्याइन्छ र दर्शकले पनि भावुक हुँदै हेरिदिन्छन् र कति राम्रो मुभी बनेछ भनी प्रतिक्रिया दिँदै सकिन्छ ।कल्पना गर्नुस् त यो रिल लाईफमा भएका कथा कसैको वास्तविक जीवनमा भयो भने कति मन दुख्ला ? महेन्द्रनगरका प्रकाश टेरको रियल लाइफमा यस्तै ब’ज्रपात परेको छ । उनीमाथि परेको ब’ज्रपात कुनै मुभिको रीलमा खिचिएको एउटा अपूरो प्रेम कहानी भन्दा कुनै फरक नै छैन । माघ ९ गते अर्थात् बिहिबार न्युज डेस्कमा एउटा स’नसनीपूर्ण खबर आयो “महेन्द्रनगरमा टिप्परको ठ’क्करबाट एक महिलाको मृ’त्यु” ।
सहकर्मी मित्रले भन्नुभयो महेन्द्रनगरमा दु’र्घटना भएछ न्यूज अपडेट गर्नुपर्यो । महेन्द्रनगर प्रहरीलाई फोन लगाऔँ ।मनमनै सोचे “दु’र्घटना पनि कत्ति हुन सकेको अहो ! गाडी चलाउनेहरु आँखा नै हेर्दैनन् कि के हो ? बाटोमा मान्छे हिडेको नि नदेख्ने !” मनमनै क’ड्किए पनि । संचारकर्मी भएको नाताले मेरो काँधमा जि’म्मेवारी थियो न्यूज अपडेट गर्ने । मैले त्यसै गरे । उही छ क समेटेर । हो, हामी ब्रे’किङ गर्नुपर्ने वा हा’र्ड न्यूज जुन छ वटा क को जवाफले आम मानिसको मनको कौ’तुहलता तत्काललाई सा’म्य पार्छ ।के कहाँ कहिले कति कुन किन यी नै कुराको जवाफसहितको एउटा खाका बनाएपछि हा’र्ड न्यूज बन्ने कारणले त्यहि गरे । पछि मात्रै विस्तृतमा समाचार लेखिन्छ ।
पछि थाहा भयो, ती युवति माघ १३ गते अर्थात् आज बेहुली बन्न लागेकी रमिता रहेछिन् । उनी आफ्नो विवाहको निम्ता बाँ’ड्न हिड्दा उक्त दुर्घटनामा परेकी रहेछिन् । मनमा उत्साह बोकेर जीवनको रंगिन सपना बोकेर कति खुसी हुँदै निम्ता बाँड्न हिँडेकी उनलाई टिप्परले कि’चेर सपना सारा सपना क्षणभरमै रंगहीन बनिदियो । रंग थियो त केवल खोलाजसरी बगेको उनको र’गतको । सडकमा प’ल्टिएको श’व भिज्नेगरी ल’त्पतिएको र’गतले मानिसहरुको हो’शहवास उड्यो । बिहेको निम्तो बाड्न हिडेकी रमिता कहिल्यै फर्केर नआउने गरि गइन्, सबैलाई रुवाएर ।तर उनको लागि सिन्दुर लिएर कुरेर बसेको प्रकाश कुन हालतमा होलान् एकचोटी कल्पना गर्नुहोस् त जो आफ्नो वर्षौंदेखिको प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्ने पर्खाइमा थिए ।
यदि त्यो घ’टना नहुँदो हो त यतिबेला नेपाली सेनामा कार्यरत प्रकाश दुलाहाको भेषमा स’जिएका हुन्थे अनि मनमा अनेकौं खुसीका बहारसँगै बाजाका साथमा जन्ती लिएर रमिताको घर जान्थे होला । अनि उता रमिता चटक्क सजिएर बेहुली बनेर बेहुला प्रकाशलाई कुहिरहेकी हुन्थिन् । बाटो हेरिरहेकी हुन्थिन्। तर दु’र्भाग्य बिहे घर शून्य छ, आज । उल्लासको ठाउँमा स्त’ब्धता छ । घर घर जस्तो नभएर म’सानघाट जस्तो सु’नसान छ, आज । रोदन छ, होस ह’राएजस्तो देखिन्छन्, परिवारका सदस्य । कुनै चलचित्रको प्ल’टजस्तो लाग्ने यो घ’टनापछि अब ति चखेवाका जोडीहरु कहिल्यै भेट्ने छैनन् ।
फेरि त्यो दिन ….गत बिहिबार कन्चनपुरको महेन्द्रनगरमा टिप्परको ठ’क्करबाट एक युवतीको मृ’त्यु भयो । जो आज दुलही बन्दै थिइन् । आफ्नो बिहेको निम्तो बाँड्न हिडेकी उनलाई टिप्परले ठ’क्कर दिँदा घटनास्थलमा नै मृ’त्यु भयो ।उनको मृ’त्यु त भयो तर यता उनको हुन लागेका बेहुला प्रकाश पानी बिनाको माछा जस्तै भएका छन् । प्रकाश नेपाली सेनामा कार्यरत छन् ।बिहेको लागि भन्दै बि’दामा बसेका उनले सायदै सोचे होलान् जीवनमा यस्तो ब’ज्रपात आइलाग्ला भनेर । उनको जीवन अ’पत्यारिलो दु’र्घटनाले छे’तबिच्छेद भएको छ । रमिता भट्टको घर बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका– १ गुरूखोला हो ।
उनि एक वर्ष अगाडी देखि महेन्द्रनगर बस्दै आएकी थिइन् । ब्राह्मण परिवारकी छोरी भएकाले परिवारले नदिने भएपछि क्षेत्री थरका प्रकाशले एक वर्षअघि नै उनलाई महेन्द्रनगरमा बस्ने चाँ’जोपाँजो मिलाएका थिए । उनीहरूको विवाह भने भएको थिएन । विहेका लागि यही माघ १३ गतेको साइत जुरेको थियो । बिहेको निम्तो बाड्न जाँदा सो घ’टना भएको हो ।दु’र्घटनापछि प्रकाशले मनै रुवाउने स्टाटस लेखेका छन् । उनले आफू एक्लै यात्रा गर्न नसक्ने बताएका छन् भने आफ्नो रमितालाई साडी लगाएर सिउँदो भरेको हेर्ने रहर भएको लेखेका छन् ।
उनको यो मार्मिक स्टाटसमा कमेन्ट गर्नेहरुले उनलाई सम्झाईबुझाई गरेका छन् । उनको द’र्दनाक भावनामा रोएका छन् । भा’वविह्वल भएका छन् । उनका साथीहरुले लेखेका छन्छन्, नआत्तिउ जोडा । हामी छौँ ।उनले भनेकाछन् नाम मात्र प्रकाश रोशनी तर हाम्रो लाइफ किन अन्धकार भयो बुढी ।यती माया दिएर किन गिस बुडी जबको करण तसंग बस्न नि पाइन्न ।मेरी पर्खाई मा बसिस घरमा कहिले हो बि’दामा आउने धेरै याद आउछ छिटो आउनु न हजुर भन्थिस ।बिच बाटैमा छो’डेर जानी भे किन आइस मेरो जिबनमा किन ..कतिसपनाहरु थिए हाम्रा कहाँ गए आज ति सपनाहरु कहा छस माली छो’डेर आफु आफ्नो ख्या’ल राखिस है ।
ग’ड नै हाम्रो दु’स्मन बन्यो अर्को जुनी म राम्ररी बिहे गरुला है मेरै भएर आइस है म तलाई लिन आउला बेहुला भएर अनि तेरो सिउदोमा सिन्दुर लाउछु तलाई रातो सारीमा घुम्टो ओडेर म आफु सँग लईजान्छु नि है बुढी । ।संगै बसुला अब तललाई कहिल्यै छो’डेर जान्न फेरि हेर न तलाई यार छो’डेर किन गए हुला म ??? सबै मेरै ग’ल्ति हो किन छो’डेको हुला तलाई यार । । ।miss uh an love uh forever and ever and ever and ever alwayss…
तपाईंहरुको सहयोगमा भ्र’ष्टाचारको अन्त्य गरि देश बनाउँछौं
नेपालमा आज अहिलेसम्मकै धेरै २ हजार २० जनालाई कोरोना संक्रमणको पुष्टि